Sidee baan u sameeyaa amar ku jira gardarrada carruurta?
Talooyin loogu talagalay gardarrada habboon
Ku dar carruurta markaad nadiifinayso
Haysashada amar-galka carruurta waa caqabad. Dharka ayaa yar, laakiin waxaa jira wax badan. Sababtoo ah carruurtu waxay u koraan si dhakhso ah waxayna ubaahan yihiin waxyaabo cusub Intaas waxaa sii dheer, caruurtu waa inay weli bartaan sababta nadiifinta joogtada ah ay muhiim u tahay oo macquul ah. Laakiin habka saxda ah iyo caawinta kuwa yaryar, waxaad ku maareyn kartaa inaad ilaaliso nidaamka guriga.
Ku dheji dharka isgoysyada
Ka hor intaadan bilaabin samaynta amar, waa in aad marka hore si fiican u faaruqiso kabadhada.
Nadiifinta dharka xannaanada
Wax kasta oo aan loo baahneyn ama aan jecleyn in la tuuro. Waxaa jira dhowr siyaabood oo ay golaha xukuumaddu si wax ku ool ah u maareyn karto loona nadiifin karo.
Tusaale ahaan, habka 3, waxaad kala soocaysaa dharka oo dhan weelasha lagu magacaabo "Hayso", "Waxtar leh," iyo "Iska tuur". Waxaad markaa go'aan ka gaari kartaa haddii aad rabto inaad iibiso, iska bixiso, iska tuur ama bixiso dharka la kala soocay ee ku jira ururinta dharka hore.
Inkasta oo geeddi-socodkani uu abuuro cillado badan marka hore, waxay suurtogal u tahay in ay si buuxda dib-u-habeyn ugu sameeyaan waxyaabaha ku jira dharka. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa wakhti aad ku tirtiri kartaa weelka madhan.
Istaraatiijiyad wax ku ool ah oo looga hortago fowdo maaha in ay dhacdo. Dabcan taasi way adag tahay carruurta. Taasina waa sababta loogu talagalay kabaha loogu talagalay in loogu talagalay inay noqdaan kuwo ku haboon caruurta iyo waxqabadka, si ay wax walba u helaan meel joogto ah:
Ku kala sooc dharka kala duwan oo kayar surwaalada mid ah jeebka, T-shirts kale oo kale.
Tusaale ahaan, waxaad isticmaashaa sanduuqyo kala duwan si aad u keydiso kabaha, dharka, boogaha ama dharka qubeyska. Si aad adiga iyo caruurtuba u sahlanaato, waad ku calaamadeyn kartaa.
Alaabada jiilaalka ee aan loo baahnayn xilliga kuleylaha iyo kuwa kale ayaa lagu kaydin karaa sanduuqyo la xidho oo ku yaal ama ku yaalla boorsada. Sidaa darteed waxaa sidoo kale laga ilaaliyaa aboorka.
Wixii dhar ah oo la xirxiray laakiin aan u baahnayn in la dhaqo, waxaad abuuri kartaa meel gooni ah. Tusaale ahaan, qaabka kursiga, tareenka dharka ama dhowr joodarood oo ku yaal dhinaca kabaha ama derbiga. Dharka ayaa mar dambe la gashan karaa maalinta xigta ama dib loogu dhejiyo kabadhada.
Sidoo kale lagugula talinayaa waa dambiisha dhar dhaqashada ee xannaanada. Qaybaha wasakhda ahi maaha kuwo aan isku mid ahayn.
Carruurta yaryar waa inay bartaan sida loo ilaaliyo amarka. Waalid ahaan, waad taageeri kartaa carruurtaada. Waalidiintu had iyo goor way noqdaan xeelad, xitaa markay soo dhejiyaan. Sidaa darteed waa muhiim in carruurta ay ku noolaadaan nidaam aasaasi ah oo aasaasi ah. Cawaaqibta iyo farriimaha cadcad ayaa weli ah kuwo aad u muhiim ah xiitaa da'da iskuulka, si ay caruurtu u ogaadaan waxa la qabanayo.
Si sprouts loo ilaaliyo amarkooda ku dhejisan wakhtigooda, waa inay awoodaan inay gaaraan maadada. Sidaas darteed dharka loo baahan yahay maalin kasta, waa inuusan ku jirin saxanka sare. Iyada oo wata weelasha cabbirka ilmaha, kuwa yaryar ayaa si fiican u qaban kara. Waxay u sahlan tahay inay iyaga labbistaan ​​dharka iyo jaakadaha. Waxaa sidoo kale jira nidaamyo istiraatiijiyadeed kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay carruurta iyo cabbirka.
Marka amar gooni ah uu jiro, way sahlan tahay in caruurtu ay sii wadaan. Sababtoo ah waxay isbarbar dhigi karaan nidaamka la dejiyay ee golaha wasiirada. Haysashada waxyaabaha la abaabulo waa geedi socod socda. Carruurtu waxay u koraan si dhakhso ahna u koraan, sidaas darteed dhar cusub ayaa loo baahan yahay waqti gaaban.
Sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa inaad sameysid xeerar si aad u soo hagaajisid, tusaale ahaan maalmo go'an oo looxadha nadiifinta. Ka sokow, sida 5-S habka waxay soo jeedineysaa in dib loo dhigo sawirada dawlad-goboleedkii ugu fiicnaa ka dib markii ay soo baxday, kala soocidda iyo nadiifinta xiritaanka. Carruurtu waxay isku kalsoonaan karaan, haddii ay is-nadiifiyaan.
Doorka awoowayaasha Waxbarashada qoyska
Tag carruurta, qol nadiif ah! | waxbarashada
Carruurta hibada leh | waxbarashada
Marka carruurtu jebiyaan sheyga | waxbarashada